Kudya KwePoints - Matanho Ekuzviita CHETE | Kudya kweNutri
Iwo mapoinzi dhayeti
Nhasi kune mazana ezvikafu vimbiso iyoyo munhu anosarudza kuitevera, mhedzisiro inoguma nemutemo wekuedza kushoma. Ivo vanozivikanwa zvakanyanya se chishamiso chikafu, rudzi urwu rwekudya rune vanoshora nevanodzivirira. Ino nguva ini ndoda kukuudza nezve a yevakakurumbira uye ndeupi mukurumbira mukuru une: iyo mapoinzi dhayeti.
Zvirokwazvo iwe unenge wanzwa nezvake uye iwe unofarira kuziva kana ichinyatso shanda kana kuti ine ane ngozi rebound mhedzisiro sezvazvinoitika mukudya kwakawanda kworudzi urwu. Tevere ini ndinokuudza zvakadzama nezve izvo zvarinazvo iyo mapoinzi dhayeti uye kana ichigona kuverengerwa sechishamiso chikafu kana ndizvo mhando yehutano kurasikirwa nehurongwa izvo zvinokubatsira iwe kurasikirwa uremu uye kubvisa mamwe ma kilos.
1 Ndeapi mapoinzi kudya?
2 Kukanganisa kwemapoinzi chikafu
3 Icho chikafu chinoshamisa here?
Ndeapi mapoinzi kudya?
Rudzi urwu rwekudya runoshanda mu imwe nzira uye yekutanga nzira zvine chekuita nemamwe marudzi enzira dzekutsvedza. Kudya kuri mubvunzo kuyera chikafu zvinoenderana nemapuroteni, mafuta kana makabhohaidhiretsi ainazvo. Zvese izvo munodya nekudya ine akateedzana emapoinzi, mune zvekudya zvakawandisa zvine macalorie mazhinji ane mapoinzi uye ane hutano hwakanaka kana mashoma macaloriki vane mapoinzi mashoma.
Munhu wega wega anosarudza kutanga rudzi urwu rwekudya, ane mhando yemaponi ezuva nezuva ine mapoinzi anosiyana zvichienderana nehunhu, huremu kana zera remunhu iyeye. Zuva nezuva, munhu anogona kudya kusvika asvika nhevedzano yemapoinzi kunyanya, saka unofanirwa kunyora pasi uye uteedzere pfungwa dzakashandiswa kuitira kuti usapfuure iwo muganho. Iwo mapoinzi dhizeti anotendera iwe kuti udye chero mhando yechikafu chero bedzi munhu wacho asingapfuuri iwo mapoinzi akadyiwa.
Maererano ne vanotsigira chikafu chakadai, kana iwe ukatevera yakatemwa mirau nemirau unosvika pakuderera uremu pasina dambudziko. Nekudaro, hazviratidzwe kuti hazviitike mhedzisiro kumagumo uye kuti ndeye 100% ye kudya kune hutano uye kwakaringana. Kana munhu akabudirira kupedzisa akati kudya, usachinje tsika dzako uye uteedzere mhando ye kudya kune hutano uye kwakaringana, unogona kuwedzera uremu zvakare.
Kukanganisa kwemapoinzi chikafu
Kana zvasvika pakuziva kana chikafu chakakurumbira chemapoinzi haina kukuvadza kuhutano, zvakakosha kubhadhara zvakanyanya kune hunhu hwainofanira kuve nahwo chikafu chine hutano uye chakaringana.
Unofanira kuwana zviyero pakati pemakori akadyiwa neaya anoshandiswa zuva nezuva. Kana zvikashandiswa mashoma macalorie kupfuura akadyiwa, kudya kwacho hakuna kuvimbika kana kukurudzirwa, ndosaka kuchikanganisa hutano.
Wedzera kudyiwa kwemafuta asina kuiswa uye kudzikisira kushandiswa kwe mafuta akazara uye mafuta anotapira.
Wedzera muzvikafu senge miriwo, michero, nzungu, zviyo zvese uye nyemba.
Deredza kushandiswa kwe shuga uye munyu pakudya kwese.
Kana iwe ukawedzera izvi ruzivo ku iyo mapoinzi dhayeti, unogona kutarisa kuti pane yakaderera koriori kudya sezvo dai izvi zvisina kudaro, zvaisazobvira kuonda. Pane zvinopesana, nekuvapo rusununguko rwakazara rwekudya, panogona kunge paine mukana wekuti munhu usadya chero muchero kana miriwo kana uchitevera rudzi urwu rwekudya. Pamusoro peizvi, munhu anogona kuramba achidya mafuta akaguta kana kutapudza izvo zvakashata chaizvo kumuviri wako. Chinokosha ndechekuti zviri pamusoro yechishamiso chikafu izvo zvinokubatsira iwe kurasikirwa nehuremu munguva pfupi asi iyo mukufamba kwenguva unayo ane ngozi rebound mhedzisiro izvo zvinokonzeresa kuti iwe uwane makirogiramu akawanda kupfuura pakutanga kwekudya.
Icho chikafu chinoshamisa here?
Kubva pachigadziko icho iyo mapoinzi dhayeti haivimbise kuonda munguva yekunyora sekunge sekunge vanoita madhayeti akawanda ezvishamiso. Rudzi urwu rwekudya rinovimbisa kuti iwe unorasikirwa pakati hafu yekilo uye kirogiramu vhiki, chimwe chinhu chinonzwisisika uye icho chinogona kuve chiri mukati mechinyakare mune chero mhando ye hutano kuronga uremu hurongwa. Kubudirira kwechikafu ichi kuri muchokwadi chekuti vanomedzwa mashoma macalorie yeavo vanopisa. Saka kana uchidaro sarudzo yakanaka yezvikafu uye zvinovaka muviri iwe unoda zuva nezuva-zuva hwaro, hapana chikonzero chekutarisa mapoinzi dhayeti kunge chishamiso chikafu.
Kana mushure mekupedza akadaro diet, uchiri nerudzi rwe kudya kwakaringana uye kwakaringana nezvinodiwa zvinovaka muviri uye unozvizadzisa neimwe kurovedza muviri zuva nezuva, hauzove nematambudziko kuchengetedza uremu hwako uye kwete kubata chero akarasika kilos nawo iyo mapoinzi dhayeti. Imwe yekuwedzera poindi yemhando iyi yekudya, ndeyekuti hazvikumanikidzi kutenga zvinovaka muviri uye zvinowedzera zvekudya kubhadhara kushomeka kwezvinovaka muviri, nekuti nechikafu chemapoinzi unogona kudya zvese uye haibvise chero yeiyo zvakakosha zvinovaka muviri kuti muviri unoda kushanda nemazvo.
Muchidimbu, iyo mapoinzi dhayeti inzira yekudzora huremu sezvazviri uye zvinoshanda kupfuura mamwe marudzi ezvikafu nehukuru hwakanyanya uhwo boka chikafu mumapoka akasiyana zvichienderana nemakoriori avo uye kukosha kwavo kwehutano. Ukasarudza kuenderera rudzi urwu rwekudya , zvakakosha kuti iwe uchinje tsika dzako dzekudya zveramangwana kubvira zvataurwa neimwe nzira chikafu rinenge risina maturo. Rangarira kuti kana iwe ukatevera mhando ye kudya kune hutano uye kwakaringana iwe unozowana kurasikirwa neiyo ekuwedzera kilos ayo anokunetsa zvakanyanya uye iwe uchazviita nenzira iyo haungakuvadzi kwete kune hutano hwako kana kune yako muviri.
Ndokuisa vhidhiyo inotsanangura nezve mapoinzi dhayeti uye chii ichakubatsira iwe kuziva zvakawanda yezvakataurwa kudya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Chipo chekubhadhara » Iwo mapoinzi dhayeti
Maitiro Ekurwisa Kudonha Kushushikana uye Kushungurudzika